विदेशीका पोस्टर चोर्दै नेपाली चलचित्र – Sourya Online
विदेशीका पोस्टर चोर्दै नेपाली चलचित्र
सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १७ गते ४:४४ मा प्रकाशित
नेपाली सिनेमा उद्योगमा कतै न कतैबाट चोरी नगरिएका चलचित्र पाउनै मुस्किल छ । नेपाली मौलिक चलचित्रको सूची हेर्ने हो भने हातका औंलामा गन्न पनि नपुग्लान् सायद ! अधिकांश नेपाली चलचित्र हिन्दी चलचित्रका जुम्ल्याहाजस्ता लाग्थे केही अघिसम्म । गहिरो आलोचनाका बाबजुद त्यो क्रम अद्यापि छँदै छ । चोरीको दायरा थपफैलिएको छ । हिन्दी सिनेमाबाट हलिउड अनि कोरियाली चलचित्रसम्म नेपाली निर्माताका नजर तन्किन थालेका छन् । सँगसँगै प्रश्न लामै समयदेखि निरुत्तरित रहँदै आएका छन्– के विशुद्ध नेपाली मौलिकताका चलचित्र बनाउन सकिँदैन ? नेपाली भाषासंस्कृतिको प्रवद्र्धन अनि प्रसारणको दायित्व नेपाली निर्माताहरूको चाहिँ होइन ? यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नेपाली निर्माता–निर्देशकले दिन सकेका छैनन् ।
केही समयअगाडि रिलिज भएको मेरो एउटा साथी छ कोरियाली सिनेमाबाट चोरी गरिएको स्वीकार त्यसैका निर्देशक सुदर्शन थापाले गरेका छन् । यो चोरीले नेपाली दर्शकको मन पनि केही हदसम्म चोरेकै हो तर विश्वबजारमा नेपाली चलचित्र भनेर फरक विशेषता देखाउने आधार भने निर्माण गर्न सकेन । उनले पछिल्लो समयमा निर्देशन गरेको के म तिम्रो साथी बन्न सक्छु पनि चोरीको आरोपबाट मुक्त थिएन । आरोप थियो– यसको पोस्टर बलिउड सिनेमा ओम शान्ति ओमबाट हुबहु नक्कल गरिएको छ ।
विजय बस्नेतको देवयानीले हलिउडको परफ्युमबाट पोस्टरशैली हुबहु चोरी गरेको देखिन्छ । निर्माता कृष्णवीर पनि यो मामिलामा अछुतो छैनन् । उनीद्वारा निर्मित घमन्डको पोस्टर हलिउड सिनेमा ब्लेडसँग मिल्दोजुल्दो छ । चपली हाइटको पोस्टर हलिउड सिनेमा बेसिक इन्स्टिङ्क्टसँग दुरुस्त छ । बेसिक इन्स्टिङ्क्टको सन् १९९२ मा निस्किएको एउटा पार्ट र सन् २००६ मा निस्किएको अर्को पार्टबाट चोरी गरिएको निर्माता अर्जुनकुमार आपैmँ स्विकार्छन् । पोस्टर मात्र होइन, कथावस्तु र छायाङ्कनसमेतलाई नेपाली निर्माताले मौलिक बनाउन सकेका छैनन् । लाग्छ, उही फर्मुलामा भाषा र अलिकति परिवेश मात्रै फरक ।
निर्माताहरूचाहिँ सस्तो लगानीमा चलचित्र सिध्याउनुपर्ने भएकाले त्यसो गर्नुपरेको बाध्यता सुनाउँछन् । अर्जुनकुमार भन्छन्, ‘मैले जानीजानी पोस्टर चोरी गरेको हुँ, बेकारमा किन धेरै दिमाग खियाइराख्नुजस्तो लाग्यो । टाइम हुँदैन, धेरै दुःख गर्नुपरेको हुन्छ, अलि राम्रो चलचित्रबाट कपी ग¥यो, टेन्सनै साफ ।’
काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा टाँसिएका चपली हाइटका पोस्टर अश्लील भएको भन्दै केही दिनअघि प्रहरीले हटाउन उर्दी जारी गरेको थियो । यस्ता पोस्टरले सडक दुर्घटना बढाउने दाबी प्रहरीको छ । यसअनुरूप चलचित्रका सबै होर्डिङबोर्ड हटाइसकेको अर्जुनकुमारले सुनाए । उनले भने, ‘यसो गर्दा झन्डै तीन लाख रुपियाँ जति घाटा लाग्यो ।’
चलचित्रमा विदेशी शैली चोर्नमा नायक भुवक केसी पनि पछि छैनन् । उनको प्रदर्शनोन्मुख साथी म तिम्रोको पोस्टर हलिउड चलचित्र द पर्सुएट अफ ह्यापिनेससँग मेल खान्छ । यद्यपि उनी यसलाई प्रतिवाद गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो चलचित्रमा चोरिएको छैन । त्यो पोस्टर कहाँबाट आयो, थाहा छैन ।’